Rafitra fampandrosoana ny fampiasa aminny finday Flutter dia rafitra fampiroboroboana rindrambaiko avo lenta. Miaraka aminny programa tohananny Google, azonao atao ny mampivelatra ny rindranasa findainao haingana kokoa sy miasa kokoa. Azoko atao ihany koa ny milaza fa Flutter, izay rafitra tena ahazoana aina aminny lafiny fametrahana sy...
Unreal Engine 4 dia iray aminireo milina lalao ampiasaina hampivelarana lalao video. Azo ampiasaina na aiza na aiza manomboka aminny filalaovana finday ka hatraminny sehatra VR. Unreal Engine 4 dia motera lalao. Unrael Engine, novolavolainny Epic Games, dia nitarika lalao am-polony mahomby mandraka androany. Ity motera ity, izay misy...
Android Studio dia programa ofisialy sy maimaim-poana anny Google azonao ampiasaina hampivelarana ny rindranasa Android. Android Studio dia programa feno sy malalaka ary natao ho anireo mpandrindra fampiharana Android. Ny programa dia miaraka amina fitaovana fampivoarana Android marobe. Miaraka aminny Android Studio, izay afaka manampy...
Anaconda Navigator miaraka aminireo fitaovana ilaina rehetra ho anireo izay maniry hampivelatra ny Python aminny Windows. Fitsinjarana Anaconda; Izy io dia misy ny fitaovana fampivoarana rehetra izay hanamora anao aminny fampiroboroboana ny rafi-pianarana milina miaraka aminny python. Rindrambaiko matihanina toa ani Jupyter, Jupyterlab,...
Kate Editor dia Text Editor ho anny Windows. Kate dia tonian-dahatsoratry ny maro an-tsoratra avy aminny KDE izay afaka miasa miaraka amina antontan-taratasy marobe. Manasongadina fehezan-kaody, fanasongadinana ny syntax, famonosana teny mavitrika, fantsom-pifandraisana ao anaty, fantsom-pifandraisana malalaka, ary fanohanan-tsoratra...
Malware Hunter dia programa iray izay miaro anao aminny viriosy Malware Hunter dia programa antivirus azonao ampiasaina raha te hiaro ny solosainanao aminny malware sy ny viriosy maditra ianao. Malware Hunter, novolavolaini Glarysoft, dia rindrambaiko fiarovana natao hamelana anao mba hijerena sy hanesorana viriosy ao aminny solosainao....
Ny fomba mora hitarika fitsapana fiarovana ny tetikasanao. Metasploit dia rindrambaiko fiarovana izay manome fampahalalana momba ny fahalemena, manampy aminny fitsapana fidirana ary ny fampandrosoana sonia IDS. Metasploit dia manampy anao hanao mihoatra ny fanamarinana ny fahalemena, ny fitantanana ny tombana aminny fiarovana ary ny...
Windscribe (misintona): Ny programa VPN maimaim-poana tsara indrindra Windscribe dia misongadina miaraka aminireo endriny avo lenta aminny drafitra maimaimpoana. Ny programa VPN, izay mamela ny fampiasana angona maimaimpoana mihoatra ny 10GB, dia manome ireo fiasa natolotry ny VPN karamaina toy ny firewall, ad blocker, tracker blocker,...
AVG Secure VPN dia rindrambaiko VPN maimaimpoana ho anny Windows PC (solosaina). Ampidiro izao ny AVG VPN hiarovana ny tambajotra WiFi anao ary hijerena an-tsokosoko. AVG Secure VPN na AVG VPN dia programa VPN maimaimpoana atolotra anny Windows PC, solosaina Mac, telefaona Android ary mpampiasa iPhone. Mba hiarovana ny tamba-jotra WiFi...
Aminny alàlanny rindranasa Clever Dictionary, azonao atao ny mikaroka ireo vaovao tadiavinao aminny loharano tsara. Navoaka ho programa maimaimpoana izay azonao ampiasaina mandritra ny fanaovana fampahalalana na fikarohana data aminny solosainanao ny fampiharana ny diksionera Clever Dictionary izay manambara ny valinny fampahalalana...
Raha te-hahita ny kintana, planeta, nebulae ary na dia ny fomba milky any an-danitra aza ianao avy eo aminny toerana misy anao tsy misy teleskaopy, Stellarium dia mitondra ny tsy fantatra habakabaka aminny efitranonao aminny 3D. Stellarium dia mamadika ny solosainanao ho planetary maimaim-poana. Azonao atao ny mandeha aminny dia...
Azonao atao ny manapaka endrika sy lahatsoratra miaraka aminny Easy Cut Studio Easy Cut Studio dia programa fanapahana endrika ahafahanny mpampiasa manapaka ny endritsoratra TrueType na OpenType, manapaka ny SVG na PDF. Easy Cut Studio dia tsy mamela ny mpampiasa hanapaka endritsoratra sy endrika aminny antontan-taratasy fotsiny, fa...
DWG FastView dia programa novolavolaina ho anao hijerena mora foana ny asanny AutoCAD aminny solosaina miorina aminny Windows. DWG FastView, DWG ary DXF sns aminny Windows. Izy io dia programa izay ahafahanao mijery rakitra miaraka aminny fanitarana. Ny programa antsoina hoe AutoCAD dia iray aminireo programa izay azo ampiasaina saika...
Tondraho aminny fatiantoka kalitao zero ny sarinao. WonderFox Photo Watermark dia programa iray izay azonao ampiasaina hanampiana fikajiana rano aminny sary aminny solosainao Windows. Miresaka fandaharana lehibe iray aho izay manolotra loharano mari-drano maimaimpoana mihoatra ny 150, fanohanana ireo mari-drano an-tsary sy an-tsoratra,...
Miaraka aminny Wise Folder Hider, azonao atao ny manafina maimaimpoana ny rakitrao sy ny lahatahinao, hisorohana ny hafa tsy hiditra aminny data manokana. Wise Folder Hider dia fitaovana fanafenana rakitra sy fisie maimaimpoana. Ireo mpampiasa dia afaka manafina ny fisie sy ny fisie azy ireo aminny fizarana eo an-toerana na ireo...
Live for Speed ​​dia lalao simulation racing azo tanterahina izay azonao lalaovina aminny solo-sainao Windows operating system. Live for Speed ​​dia iray aminireo lalao malaza indrindra izay tokony tianny mpilalao rehetra te handray anjara aminny fanahafana ny hazakazaka azo tanterahina. Raha te hankafy ity lalao ity ianao izay tsy misy...
PES 2021 Lite dia azo lalaovina aminny PC! Raha mitady lalao baolina kitra maimaimpoana ianao dia eFootball PES 2021 Lite no tolo-kevitray. PES 2021 Lite PC voalohany ho anireo izay manantena ny lalao baolina kitra PES maimaim-poana! Ny lalao baolina kitra eFootball PES 2021 Lite, izay tazonina hatrany aminny FIFA aminny PC, consoles ary...
Notepad3 dia tonian-dahatsoratra izay ahafahanao manoratra kaody aminny fitaovana Windows. Notepad3, izay novolavolaina nanohitra ny Notepad, izay tsy niova sy nanavao mihitsy tao anatinny 20 taona taminny tantaranny Windows ary natao hampiasainireo mpanamboatra lozisialy, dia afaka manohana fiteny maro. fotoana mitovy....
Navoaka ho lalao paikady ny Anno 1800. Anno 1800 dia ny kinova 2019 anny lalao paikady izay efa an-dàlam-pandrosoana nandritra ny taona maro. Anno 1800, novolavolaini Blue Byte ary navoakanny Ubisoft, dia misongadina fa iray aminireo lalao paikady novolavola nandritra ny fotoana ela. Anno 1800, izay tsy mitovy aminny lalao paikady hafa...
UltraEdit dia fitaovana vahaolana matihanina izay safidinireo mpandahatra programa maro manerantany, manohana endrika am-polony. Tsy mitovy aminireo rindrambaiko mpanon-dahatsoratra hafa miaraka aminireo endri-javatra mandroso, UltraEdit dia tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra matihanina mifanaraka aminny fiteny fandefasana hafa toa ny...
Hello Neighbor 2 dia ao aminny Steam! Hello Neighbor 2 Alpha 1, iray aminireo lalao fampihorohoroana miafina tsara indrindra aminny PC, azo alaina maimaim-poana izao. Hello Neighbor 2 Alpha 1 dia azo alaina maimaim-poana alohanny famoahana ny Hello Neighbor 2. Hello Neighbor, iray aminireo lalao mampatahotra mangingina tsara indrindra...
Maxnote dia fampiharana fakana an-tsoratra izay azonao ampiasaina aminny fomba miasa aminny rafitra fiasa Windows. Maxnote dia fampiharana mandray an-tsoratra izay azonao ampiasaina aminny solosainao. Maxnote dia manolotra saika ny zavatra rehetra azonireo mpifaninana aminy atao maimaim-poana aminity faritra mifaninana ity. Azonao atao...
Image Tuner dia programa fanovana sary maimaimpoana sy mahomby izay ahafahanao manao fanovana sary isanandro. Mpampiasa maro no tsy mila ny fiasa miasa aminny programa toa ny Photoshop hanaovana asa fanodikodinana sary tsotra sy tsotra. Satria, aminny ankapobeny, ny fiasa isanandro ataontsika aminny rakitra sary; Manova ny endriny,...
Ny Reshade dia rindranasa manitsy ny pixel aminilay sary nohalehibeazinao ary mamokatra sary kalitao tsara kokoa. Reshade dia karazana fampiharana fanovana sary. Tokony ho hitanao fa mihena ny kalitaonny sary misy vahaolana ambany rehefa entinao any aminny tahanny vahaolana avo lenta izay tadiavinao. Na dia azonao atao aza ny manao...
PDF Unlock dia rindrambaiko novolavolaini Uconomix izay manala ny tenimiafinao aminny rakitra PDF. PDF Unlock dia programa iray hanokafana ireo rakitra PDF voahidy. Ny PDF Unlock dia hapetraka vetivety aorianny tsindrio ny rakitra fametrahana ary hitarika anao avy hatrany aminny efijery an-trano. Nefa alohanny hahatongavana aminity...
DAEMON Tools Lite dia programa famoronana kapila virtoaly maimaimpoana ahafahanao manokatra rakitra sary mora foana miaraka aminny fanitarana ISO, BIN, CUE aminny famoronana kapila virtoaly. DAEMON Tools Lite dia rindrambaiko maimaim-poana sy azo antoka mamela ny mpampiasa hamorona kapila (kapila) virtoaly aminny solosainizy ireo. Noho...
Raha mitady mpitantana rakitra mora sy haingana hitantana ireo rakitrao ianao dia azonao atao ny manandrana ny fampiharana Orion File Manager. Ny rindranasa Orion File Manager dia mamela anao handamina mora foana ireo rakitrao aminny fitaovanao Android. Raha te handamina mora foana ny horonan-tsary, sary, antontan-taratasy, mozika,...